How To Be Creative Out-Of-This-World Costumes in “The Nutcracker and The Four Realms” – 𝐀𝐫𝐢𝐞𝐥'𝐬 𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞
“The Nutcracker And The Four Realms” ဇာတ်ကားလေးဟာ (၁၈၇၁) ၁၈ရာစုနှစ် Victorian Era ရဲ့နာမည်ကြီးစာရေးဆရာ E. T. A. Hoffmann ရေးသားတဲ့ “The Nutcracker and the Mouse King” နဲ့ Marius Petipa ရေးသားတဲ့ “The Nutcracker” ဂန္တဝင်ဝတ္ထုတိုပုံပြင် တို့ကိုအခြေခံပြီး “Ashleigh Powell” ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းအရ ဒါရိုက်တာ“Lasse Hallström” နဲ့ “Joe Johnston” တို့ကရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးလေးကတော့ မင်းသမီးလေး “Clara” ဟာ ဖာသာ “Drosselmeyer” ပေးတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ စတုတ္ထကမ္ဘာ “Land of Amusements” သခင်မ “Marie”ရဲ့ Nutcracker Music Box လေးနဲ့အတူ ကြွက်ဘုရင်လေး “Philip” ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကြောင့် “Land of Sweets”ရဲ့သခင်မ “Sugar Pulm Fairy” , “Land of Snowflakes”ရဲ့သခင် “Shiver” , “Land of Flowers”ရဲ့သခင် “Hawthorne” တို့ရှိရာဘုံကမ္ဘာလေးခုကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ စတုတ္ထမြောက်ဘုံကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ “Mother Ginger”နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ကာ Nutcracker Music Box လေးကိုဖွင့်တဲ့ Magic Key လေးကိုအရယူပြီးနောက် ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့တွဲဖက်ပြီး Christmas Eve ပါတီပွဲလေးမှာ Music Box ထဲကတေးသွားလေးနဲ့အတူ ကခုန်ပျော်ပါးခဲ့တဲ့ Fantasy Adventure Fairy Tales လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်မှာ ဒီဇာတ်ကားလေးနဲ့ “Walt Disney Studios Motion Pictures” က “Reframe Stamp Award” ကိုဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။
Costumes Designs တွေရဲ့ဒီဇိုင်နာကတော့ “Best Costumes Designs Oscar” နှစ်ဆုရှင် “Jenny Beavan” ကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး “CDG Award” မှာ (Nominated) နာမည်စာရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ “The Nutcracker And The Four Realms” ဇာတ်ကားလေးရဲ့ Character Looks တွေဟာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေသာမက ဖက်ရှင်လောကရဲ့ Costume Designer တွေအတွက်ပါ ရင်သပ်ရှုမော အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ Costume Designer “Jenny Beavan” နဲ့ Makeup and Hair Designer “Jenny Shircore”တို့ဟာ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ Character Looks တွေကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ရိုးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ Concepts တွေနဲ့ ပုံပြင်လေးရဲ့ Time-line ဖြစ်တဲ့ Victorian ခေတ်က ပါတီပွဲတွေ ၊ အရုပ်တွေ ၊ Fairy Tales တွေ ၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေ ကိုဦးတည်ကာ INSPIRE ယူပြီး ဂန္တဝင်မြောက်တဲ့ဝတ်စုံတွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆံပင်နဲ့မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလဲ Victorian Era ရဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်ထဲကစတိုင်တွေကိုခေတ်မီအောင်ဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်။“Jenny Beavan” ဟာ ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာ “Guy Hendrix Dyas” နဲ့အတူ(၁၂)ပတ်ကြာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီး လူအယောက်(၁၀၀)ကျော်ရဲ့အင်အားနဲ့ Costume ဝတ်စုံ(150) ကိုချုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဝတ်စုံ(၇၀၀)ကိုငှားရမ်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဝတ်စုံတိုင်းဟာ အနုပညာရဲ့ဝိဉာဉ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။
CLARA ရဲ့ ပထမဆုံး Costumes Look လေးက Organza နဲ့ Chiffon တို့နဲ့ချုပ်လုပ်ထားပြီး ဒူးအောက်အရှည်ရှိတဲ့ ခရမ်းနုရောင် “Mauve Organza Party Dress” ပိုးထည်ဂါဝန်လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ကျီလက်ကို Puffed sleeves အသွင်အထပ်ထပ်ပြုလုပ်ထားပြီး ရင်ဘတ်ရှေ့မှာပန်းတစ်ပွင်နဲ့အလှဆင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ဂါဝန်လေးရဲ့အောက်ပိုင်းကိုလည်း ပိုးဇာအပါးနဲ့အထပ်ထပ်ချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။ Christmas Eve Party ပွဲလေးကနေ တခြားကမ္ဘာကိုသွားတဲ့ဇာတ်ကွက်မှာ ဝတ်ဆင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် (Flowers, Sweets, Snowflakes)စတဲ့ တခြားကမ္ဘာလေးခုရဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့ခရစ်စမတ်ပါတီတို့ရဲ့ Concepts တွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီး Victoria ခေတ်ရဲ့ဖက်ရှင်တွေကနေ Inspire ယူကာ ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ ဒီဇိုင်နာ “Jenny Beavan” ကဆိုခဲ့တယ်။ ခရစ်စမတ်ပါတီပွဲထဲက ကျက်သရေရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ (Elegance Look) ကိုပေးချင်တဲ့အပြင် နှင်းပြင်ထဲကနူးညံ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အသွင်ကိုဖော်ပြချင်ကြောင့် Disney ရဲ့တခြား Iconic Gown တွေနဲ့မတူတဲ့ ခရမ်းနုရောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“Mauve Organza Party Dress”
CLARA ကထူးခြားတဲ့ကမ္ဘာ့ဘုံကိုရောက်သွားတဲ့အခါ မိခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသိရပြီးနောက် စတုတ္ထဘုံရဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါ ရွှေရောင်နဲ့ ကရင်မ်အရောင်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Victorian-style Frock Costume အသစ် “ Pageant Dress” ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဝတ်စုံလေးကိုတော့ ရွှေရောင်ဘရိုကိတ်ပိုးပိတ်နဲ့ကရင်မ်အရောင် Organza တို့နဲ့ချုပ်ထားပြီး ရွှေရောင် ပိုက်ကွန်သဏ္ဍာန်ဒီဇိုင်းအစပေါ်မှာ ပုလဲတွေ ၊ ရွှေရောင်စိန်ပွင့်တွေနဲ့အလှဆင်ထားပါတယ်။ ဖဲပြားနဲ့ကြက်ဆံမြီးကိုပေါင်းစပ်ပြီး Victorian-style ဆံထုံးနဲ့ဖက်ရှင်ကျကျလှပတဲ့ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်ထဲက နတ်သမီးတစ်ယောက်ရဲ့အသွင်ကိုပုံဖော်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ “Jenny Beavan” ကဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ Pageant Dress”
Mother Ginger ရှိတဲ့ စတုတ္ထမြောက်ဘုံကမ္ဘာသို့သွားရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဇာတ်ပိုင်းကိုရောက်တော့ CLARA အတွက် “Soldier Costume Dress” ကို ဖန်တီးဝတ်ဆင်စေခဲ့ပါတယ်။ ရဲရင့်ပြီးအင်အားရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အသွင်ကို ပြသခြင်တဲ့အတွက် အစိမ်းရောင် Velvet အစနဲ့ အနီရောင်သိုးမွှေးအစတို့ကို အရောင်ရင့်ရင့်သုံးထားပြီး ရွှေရောင်အက္ခရာတွေ ၊ ချွန်ထက်တဲ့ရွှေရောင်အနားကွပ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားခဲ့တယ်။ ဒီဝတ်စုံလေးကတော့ Victoria ခေတ်ကစစ်သားအရုပ်ကလေးကနေ Inspire ယူပြီး Military Style အမျိုးသမီးဖက်ရှင် Costume အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ “Jenny Beavan” ရဲ့အကြိုက်ဆုံး Costume တစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။
“Soldier Costume Dress”
CLARA ရဲ့ Costume တွေထဲမှာ လူအင်အားအများဆုံးသုံးပြီးဖန်တီးခဲ့တဲ့ဝတ်စုံလေးကတော့ “Light Up Dress” လို့လဲနာမည်ကြီးတဲ့ “Coronation Dress” လေးပါဘဲ။ ရွှေရောင် ၊ ငွေရောင် ၊ ခရမ်းနုရောင် ၊ ကရင်မ်အရောင်စတဲ့ အရောင်နုတွေရောစပ်ထားတဲ့ မက်တယ်လစ် Organza တွေ ၊ ငွေရောင် Glitter တွေပါတဲ့ဇာအပါးတွေ ၊ အဖြူရောင် Gossamer နဲ့ ပန်းထိုးဇာတွေနဲ့ ဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်။ Pin-prick crystals (1800) နဲ့အတူ Swarovski Crystals (2500) ၊ LED မီးလုံးပေါင်း (1428) လုံးတို့ကိုအစထဲမှာထည့်ပြီး ချုပ်ထားတဲ့အတွက် စကတ်အလွှာထဲကအလင်းရောင်တွေဖြာထွက်နေတဲ့ “Magical Dress” လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝတ်စုံလေးကို လူ(၁၃)ယောက်နဲ့နာရီပေါင်း(၃၅၁)နာရီကို သုံးပြီးဖန်တီးခဲ့တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ “Nutcracker” ပုံပြင်လေးဟာ စက်မှုတော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို စတင်သုံးစွဲလာနိုင်တဲ့ Victorian Era မှာထင်ရှားခဲ့တာပါ။ သမိုင်းကြောင်းရဲ့အထင်ကရအဖြစ်အပျက်နဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဒီဝတ်စုံလေးရဲ့ Theme တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
CAPTAIN PHILLIP HOFFMAN ရဲ့Costume ကိုတော့ ရပ်ရှားပန်းချီဆရာ Gennady Spirin ရဲ့ပုံကနေ Inspire ယူပြီး အနီရောင်သိုးမွှေးနဲ့ Cotton Moleskin ပိတ်အမျိုးအစားကို ရွှေရောင်ကြီုးတွေ ၊ Tassels အနားသတ်အမွှေးတွေကိုသုံးပြီး ရွှေရောင်ဦးထုပ်နဲ့တွဲဖက်ကာတောက်ပစွာဖန်တီးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
CAPTAIN PHILLIP HOFFMAN
Land of Sweets သခင်မ “SUGAR PLUM FAIRY” ရဲ့ Costume Dress ကို သကြားကပ်ထားတဲ့ Sugarplum ကနေ Inspire ယူပြီးဖန်တီးထား ခဲ့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အကြီးဆုံး Costume ဝတ်စုံဖြစ်တယ် လို့ “Jenny Beavan” ကဆိုတယ်။ သကြားကပ်ထားတဲ့Sugarplumရဲ့အရောင်ဖြစ်အောင် ပန်းရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ရွှေရောင်၊ငွေရောင်မက်တဲလစ် Organza တို့နဲ့အတူ Sugarplumရဲ့Shade Color ကိုဖြစ်စေရန်ပန်းရောင်နဲ့ခရမ်းနုရောင် Organza တွေကို ခရမ်းရောင် Satin ပိုးစတွေနဲ့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခဲ့တယ်။ အနားသပ်တွေကိုတော့ ငွေရောင်စိန်လုံးတွေ၊ ပန်းရောင်ပုလဲလုံးတွေ၊sequins တွေနဲ့ပန်းထိုးထားခဲ့တယ်။ Pleated Gown တစ်ထည်ဖြစ်ပြီး မီတာ၁၀၀ရှိတဲ့ပိတ်စတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖန်တီးခဲ့တဲ့ Costume Dress တစ်ထည်ပဲဖြစ်ပြီး နာရီပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်အသုံးပြုပြီး ဖန်တီးခဲ့ရတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒီဝတ်စုံနဲ့လိုက်ဖက်အောင် ဆံပင်ကိုလဲ Yak Hair Style နဲ့တွဲဖက်ခဲ့ပြီး ဆံပင်ရဲ့အရောင်ကိုသကြားမျှင်ရဲ့အရောင်အတိုင်းဖြစ်အောင် ပန်းရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်တို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီး အရောင်ပြောင်းထားတာဖြစ်တယ်။
Land Of Snowflakes ရဲ့သခင် SHIVER ရဲ့Costume Dress ကိုတော့ငွေရောင်တွေနဲ့တောက်ပအောင်ဖန်တီးထားပြီး ပိုမိုလေးနက်တဲ့အသွင်ကိုရအောင် မီးခိုးရောင်၊ ငွေရောင် ၊ အပြာရောင်သန်းတဲ့ပိတ်ကိုအထူးအသုံးပြုထားခဲ့တယ်။ Character Look ကိုပိုမိုပေါ်လွင်စေအောင် ဆံပင်ပုံကိုရေခဲလိပ်ပုံဖန်တီးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Land Of Flowers ရဲ့သခင် HAWTHORNE ရဲ့ Costume တော့ Giuseppe Arcimboldo ရဲ့ပန်းချီကားကို Inspire ယူပြီးဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်မျိုးစုံကိုအသုံးပြုပြီး Floral Design ဝတ်စုံနဲ့အတူ ၁၇၅၀ခုနှစ်ကဆံပင်ပုံစံနှင့်တွဲဖက် ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒီဝတ်စုံလေးကနေပေးချင်တဲ့ “SUGAR PLUM FAIRY” ၊ “SHIVER” နဲ့ “HAWTHORNE” တို့ရဲ့ Costume Dress တွေကနေပေးချင်တဲ့ခံစားချက်ကတော့ Royalty နဲ့ Fantasy ဆိုတဲ့ အသွင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ “Jenny Beavan”ကဆိုပါတယ်။
Land Of Snowflakes ရဲ့သခင် SHIVER
Land Of Flowers ရဲ့သခင် HAWTHORNE
Land Of Amusements ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ MOTHER GINGER ရဲ့ Costume ဟာအစပိုင်းမှာပုံမှန်ထက်ကြီးမားတဲ့ဘဝပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့ရှိပြီး သူမရဲ့စကတ်ဟာကြီးမားတဲ့ ဆပ်ကပ်တဲဖြစ်ပါတယ်။ စကတ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ ဟောင်နွမ်းနေတဲ့ဘောင်းဘီရှည်နဲ့ဘွတ်ဖိနပ်ကိုဝတ်ဆင်ထား Costume ပုံစံကိုတွေ့ရတယ်။ သူမဟာတကယ်တော့ ဘီဒိုထဲမှာစွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ ရုပ်သေးကြိုးဆွဲလေးတစ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်နဲ့အတူ အထီးကျန်တဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြချင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့် MOTHER GINGER ရဲ့ Costume Dress ကို နိုင်ငံပေါင်းစုံကပြုလုပ်တဲ့ ခေတ်ဟောင်းပိတ်စတွေနဲ့အသုံးပြုပြီး ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ “Jenny Beavan”ကဆိုပါတယ်။ သူမရဲ့ဆံပင်ပုံကိုတော့ 1750s ကနာမည်ပြီးပန်းချီဆရာ Thomas Gainsborough ရဲ့ပန်းချီကားထဲမှ ဆံပင်ပုံစံကို Inspire ယူပြီးဆန်းသစ်အောင် ပြန်လည်ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“The Nutcracker And The Four Realms” ဇာတ်ကားထဲက ဒီဇိုင်းနာ“Jenny Beavan” ရဲ့Costume ဖန်တီးမှုတွေဟာ ထူးခြားဆန်းကြယ်ပြီး ခန်းနားထည်ဝါလှပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ယာထဲက Fantasy Adventure Farily Tale လေးတစ်ခုကို ဖက်ရှင်အနုပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး စစ်မှန်တဲ့လောကထဲသို့ဖန်တီးသယ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့Costume Design တွေကို ဒီဇာတ်ကားလေးရဲ့ သရုပ်ဆောင်အနုပညာရှင်များက ကြိက်နှစ်သက်ရုံသာမက ယနေ့ခေတ် Costume Party များမှာလဲ ဝတ်ဆင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခရစ်စမတ် Costume ပါတီပွဲတွေမှာပေါ့။ ဒီနှစ်မှာခရစ်စမတ်ပါတီပွဲတွေကျင်းပခွင်ရမယ်ဆိုရင်လဲ ဒီ Costume ဝတ်စုံတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ကလေးတွေကို တွေ့ရဦးမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ Happy Chrismas!!!! ခရစ်စမတ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေ……..
Tags: Costume Design, Costume Designer, Creation and Inspiration, Creativity, Inspireurmind, Jenny Beavan, The Nutcracker and The Four Realms, Thi&FashionAlliance
Previous Look-book of local actress: Nay Chi Oo
Next 10 Costumes in “The Nutcracker and The Four Realms” Look-book